ကချင်ထိုးစစ် မရပ်လျှင် အပစ်ရပ် ၁၀ ဖွဲ့ ဆွေးနွေးရေး အစီအစဉ်ကို ပြန်သုံးသပ်မည် | ဧရာဝတီ
ခင်ဦးသာ| January 3, 2013 | Hits:4,584
5 | | ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲများ ရပ်တန့်ရန် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
အစိုးရ စစ်တပ်အနေဖြင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) အပေါ် ထိုးစစ်ဆင်နေမှုအား ရပ်တန့်ခြင်း မပြုပါက အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အနေဖြင့် ထပ်မံဆွေးနွေးမည့် အစီအစဉ်များကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ဆိုသည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့တို့အကြား ပဏာမအဆင့် အပစ်ရပ်စဲထားပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူထားကြောင်း၊ သို့သော် တခြားတဘက်တွင် ထိုးစစ်ဆင်နေသည့်အတွက် အစိုးရ၏ ပြောဆိုမှုအပေါ် သံသယရှိကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ပြောခွင့်ရသူ နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။
“(၂၀၁၂) နိုဝင်ဘာလမှာ ဦးအောင်မင်းနဲ့ တွေ့တုန်းက အခု (၂၀၁၃) ဇန်န၀ါရီလထဲမှာပဲ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူထားကြတယ်။ အခု ကချင်ကို ထိုးစစ်တွေ ဆင်နေတော့ နိုင်ငံရေးအရ မဆွေးနွေးချင်တဲ့ သဘောလို့လည်း တဖက်က ယူဆလို့ရတယ်” ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကချင်ဒေသတွင်း ထိုးစစ်ဆင်နေမှုများအား ရပ်တန့်ပေးရန်နှင့် မရပ်တန့်ပေးပါက နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးသည် အာဏာရအစိုးရနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြည်ပအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၁၁ ခုအား စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် UNFC က ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အာဏာရ လူတစုသည် မိမိတို့ အကျိုးသာကြည့်ပြီး တခြားသော လူမျိုးများအပေါ် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ဖိနှိပ်၍ စစ်ရေးအရ လုပ်ဆောင်နေခြင်းကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အထိ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားနေရကာ ပြည်သူများ ဒုက္ခရောက်နေသည်ကို သင်ခန်းစာမယူဘဲ စစ်ရေးအရ ဖြေရှင်းနေခြင်းသည် မိုက်မဲသည့် လုပ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြေညာချက်က ဆိုထားသည်။
“အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ စစ်တပ်ဆိုတာက သူတို့အားလုံးက အတူတူပဲလေ။ ဒီတော့ တဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေး စကားပြောပြီး တဘက်က ထိုးစစ်ဆင်နေတာကိုက ရိုးသားမှု မရှိဘူး” ဟု နိုင်ဟံသာက ဆိုသည်။
ကချင်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား ဒေသတချို့၌ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေရခြင်းသည် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် တို့အနေဖြင့် သဘောတူညီထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိသည့်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ပဏာမအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်မှာ တနှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း တိုက်ပွဲများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း (SSA-S) ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဝ်ဆိုင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကချင်ဒေသတွင်း ထိုးစစ်ဆင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေလည်စေမည့် နည်းလမ်းကို မသုံးဘဲ စစ်ရေးအရ အင်အားသုံး ဖြေရှင်းပါက အားလုံးမျှော်မှန်းထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်များ အောင်မြင်မည် မဟုတ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ကချင်က နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အစိုးရက နိုင်ငံရေး မဆွေးနွေးချင်ဘဲ စစ်ရေးပဲ ပြောနေတယ်။ စစ်ရေးက အရင်ကလည်း ဆွေးနွေးပြီးပြီပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြန်တိုက်နေရတာပဲ။ ဒီတော့ စစ်ရေးက ဆွေးနွေးစရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်တယ်” ဟု ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဝ်ဆိုင်းက ဆိုသည်။
ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တို့ ၂၀၁၂ နှစ်၊ နှောင်းပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့၌ တွေ့ဆုံစဉ် အစိုးရဘက်က စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး နှစ်မျိုးစလုံး ဆွေးနွေးရန် သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း KIO က နိုင်ငံရေးအရသာ ဆွေးနွေးမည်ဟု ပြောဆို၍ ဆွေးနွေးပွဲ အားနည်းခဲ့ရကြောင်း ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခဲ့သူတဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဦးအောင်မင်းသည် KIO နှင့် ထပ်မံဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်းထားသော်လည်း KIO က အကြောင်းပြန်ကြားမှု မရှိသေးကြောင်း၊ ဦးအောင်မင်း အနေဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်မည်ဟု မီဒီယာများကို ပြောဆိုထားကြောင်း ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဦးဝေဖြိုးကျော်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ဦးအောင်မင်းက ကမ်းလှမ်းပေမယ့် KIO က အကြောင်းပြန်တာ ဒီနေ့အထိ မရှိသေးပါဘူး။ ၀န်ကြီးကတော့ ဆက်ကြိုးစားမယ် ပြောထားတယ်” ဟု ဆိုသည်။
KIO နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ဦးအောင်မင်းက ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အကြောင်းစာပေးပို့ပြီး၊ ၁၄ ရက်နေ့တွင် စစ်တပ်အင်အားတိုးချခဲ့ကြောင်း၊ ယခုလည်း အစိုးရ စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်နေမှုများကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ နည်းပါးကြောင်း၊ ဦးအောင်မင်း အပေါ်လည်း ယုံကြည်မှု နည်းပါးသွားကြောင်း KIA ပြောခွင့်ရသူ ဦးလနန်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ယနေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာများက ရေးသားထားရာတွင် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေးအတွက် လဂျားယန် စခန်းသို့ ရိက္ခာပို့လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထား၍ KIA ကို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ KIA ၏ အဓိက ကင်းထောက်စခန်းတခုမှ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်၊ ခဲယမ်းများ သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
လဂျားယန်ဒေသသည် KIA ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာဒေသနှင့် နီးသည့် နယ်မြေတခုလည်း ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရစစ်တပ်၏ လေကြောင်းမှ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုများအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း အမေရိကန်နှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကလည်း ပြောဆိုလိုက်ပြီး ထိုးစစ်များ အမြန်ဆုံးရပ်တန့်၍ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများရှာဖွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာကြရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းပြမြေပုံ တိုင်းရင်းသား ညီလာခံ ချမှတ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Baw Goung January 3, 2013 - 7:50 pm	စစ်သမတသိန် စိန်း စစ်ဝန်းကြ႘းရုံးအောင်မင်
Reply	အောင်အောင် January 3, 2013 - 11:53 pm	‘မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ် ပြန်ဖြစ်အောင် မီးစမွှေးတာ ငါတို့ကွလို့ ’ ဂုဏ်ယူလိုက်တော့ KIA ရေ။ အစိုးရကို အပြစ်ပုံ ချဖို့ လည်း ဝိုင်း
ဝန်းပေးကြဗျာ။ဒါမှ KIA က ထင်ရာလုပ်နိုင်မှာ။
Reply	yi yi January 4, 2013 - 2:06 pm	အနိုင်ကျင့်တာကိုငြိမ်ခံနေတာက ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘူး။ကြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 4, 2013 - 3:15 am	အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ မညီဘူး ဖြစ်နေပြီ သမတကြီး ဦးသိန်းစိန်။
ကိုယ့်လူတွေ ကိုယ်မနိုင်ရင် သမတ မဖြစ်သင့်ပါ။ အုပ်ချုပ်ပုံ လုပ်ရပ်မညီတဲ့ အဖွဲ့ နိုင်ငံကို မအုပ်ချုပ်သင့်ပါ။
Reply	Shwe Yoe January 4, 2013 - 9:31 am	Kachinland, Chinland, Shanland and Karenniland were not parts of Burma when Thi Baw was captured. They were occupied separately by the British. That was the only reason Kachin leaders, Shan leaders, Chin leaders and Karenni Leaders were invited by Aung San to formaUnion. Karenni did not sign the Pang Long treaty but they later joined them. The Kachins, the Chins and the Shans were the founding members of the Union along with Aung San. The agreement from the Pang Long had been violated and betrayed the Union members by the Myanmars as soon as Aung San was assassinated. We the ethnics felt terrible since we had been betrayed. Now, we thought we have been closer to the real Union but the Myanmars have been assaulting our fellow Union member, Kachins on their own land. We have seen and witnessed enough. We have suffered enough. Suu Kyi was believed to stand with us but now she turned her deaf ears on us. Maybe, this is the Myanmar’s way of life. If the Kachins ask what they do not deserve, we might not sayaword. But the Kachins are asking for what they have been guaranteed by the Pang Long Agreement. The Kachins never betray the Union and the Pang Long Treat but the Myanmars did.
Reply	GoldenfBone January 4, 2013 - 2:57 pm	Shweyoe,do u haveamirrror at home?
Reply	pps၁၂၃၄၅ January 4, 2013 - 8:15 pm	မှန်ပါသည်။ သခင်အောင်ဆန်း အမျှာ်အမြင်ရှိခဲ့၍ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား မြို့၏ အရှေ့ဘက်ခြမ်း သည် ဗမာ ပိုင်သည် ဟု အထောက်အထား မပြနိုင်ပဲ မန်ချူး အစိုးရ နှင့် အင်္ဂလ်ိပ် အစိုးရတို့ချုပ်ထားသော မြေငှား စာချုပ်သာ ရှိကြောင်း ဦးနုက မိန့်ခွန်း ထဲတွင် ပြောဖူးပါသည်။ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ချုအင်လိုင်း ကလည်း သူငယ်စဉ် က အင်္ဂလိပ် အစိုးရ ကမန်ချူးတွေဆီက တရုတ်မြေ တွေကို ဖဲ့သိမ်းခဲ့၍ ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း ဦးနုကို ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ဦးနုမှ လည်း တိုင်းရင်းသား များကို တန်းတူညီမျှ စောင့်ရှောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသား များထံမှ သယံဇာတများကို တိုင်းရင်းသား များ ဆန္ဒနှင့် သာ ထုတ်သုံးမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားများ အတွက်သာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ သိရပါသည်။
သို့သော် ဦးနုကို တော်လှန်ခဲ့သော အစိုးရသည် တိုင်းရင်းသား များထံမှ သယံဇာတများ ကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ နာမည်ဖြင့် ထုတ်သုံးခဲ့ကြပါသည်။
Reply	moejoo January 4, 2013 - 10:58 am	All of group i want to ask you??want to back Marshal law policy……thinking rightly.